Sida dumarka loo sasabo | Ragga Caqliga leh
Sida dumarka loo sasabo
Alicia tomero | 20/09/2021 10:00 | Lamaanaha iyo Galmada
Mawduuca sasabashada Waxay u noqon kartaa fanka dhammaan dadka aan dhib ku qabin abuurista sixirkaas. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira rag kuwaas waxay la kulmaan turunturoonkan weyn, mar haddii farshaxanka khiyaanada haweeneydu uu noqdo wax aan la gaari karin.
Awoodda sasabashada waxay ku xirantahay danta soo jiitaan dareenka qofka, inaad awood u leedahay inaad ka adkaato daqiiqaddaas oo aad rabto inay kula kulanto si ay shukaansigu u jirto. Haddii aad rabto inaad ogaato qaar ka mid ah faahfaahinta waa inaad ogaataa waxaan soo jeedineyno si waqtigaas soo jiidasho weyn labadaba.
1 Si dabiici ah oo xarrago leh u labbis
2 Bilow raadinta calaamadahaaga
3 Isticmaal luqadda jirkaaga
4 Waqtiga xiriirka
5 Qodobbada muhiimka ah ee caawiya wada hadalka
Si dabiici ah oo xarrago leh u labbis
Shaki la'aan, ka hor inta aan la soo bandhigin, haddii ay hore u jireen muuqaallo taxane ah, waa inaad filaysaa daqiiqaddaas oo aad u ogaataa in waxa uu arkayo ay sax yihiin. Muuqaalkaaga gaarka ah iyo lebiskaagaKuwani waxay ka mid noqon doonaan waxyaabaha soo jiidan doona dareenkaaga.
Dooro dhar dhex -dhexaad ah, oo sasabanaya oo kuula muuqda mid wanaagsan, xitaa haddii aad iska tagto si aan caadi ahayn. Xusuusnow in dharka aad dooratay ay yihiin kuwa ku dareensiiya isla markaana la jaanqaada shaqsiyaddaada mar haddii dumarku arrintaas aad u fiirsadaan.
Qubeyso ka hor intaadan bixin si aad u guulaysato, timo fiican u hagaaji oo haddii aad gadh leedahay waa inaad haysataa si fiican loo diyaarshay. Barafuun leh shakhsiyad oo ragannimadu sidoo kale aad bay u guulaysataa. Dhammaan faahfaahintaan yar waxaad ku dareensiin doontaa inaad aad ugu kalsoonaato inaad adigu noqon karto.
Bilow raadinta calaamadahaaga
Haddii aad dareentay haweeneydaas, waad bilowday fiiri sida uu u dhaqmo iyo u dhaqmo. Gabadhaasi, haddii ay ogaatay joogitaankaaga, waxay awoodi doontaa inay ku muujiso wax kale oo leh calaamado taxane ah.
Haddii haweeneydu ku eegto, iska fiiri kadibna ku eeg mar kale, hubaal wuu ku ogaaday. Haddii uu kugu dhoolla caddeeyo oo indhihiisa si aad ah u dhaqaajiyo si uu ku eego, hubaal waa calaamado aad u wanaagsan. Waxaa laga yaabaa in sidoo kale, laga yaabo inay ku dhex jiraan muuqaaladaas madaxaaga hoos u dhig kadibna eeg dhinaca, ama si qiiro leh u qoslaa. Sidoo kale waa calaamad muujinaysa inay jiri karto xiriir.
Isticmaal luqadda jirkaaga
Haddii aad rabto in joogitaankaaga loo tilmaamo sida mudane, waa inaad abuuro xiriir jidheed oo xarrago leh oo ammaan ah. Madaxaaga hoos ha u dhigin, jirkaagana kor u taag garbahaaga oo dhabarkaaga kor u qaad. Haddii aad wax cabayso, ha ku hor cabin laabtaada horteeda iyo isku day inaad jidhkaaga u jeediso xaggeeda.
Haddii aad dooratay inaad naftaada u bandhigto naagtaas, waa inaad abuuraan jawi wada noolaansho si uu u joogo inuu kula sheekeysto cabbaar. Waxaad ku bilaabi kartaa a Sidee tahay IYO aan dhisin jumlado aad u xun. Waa inaad heshaa hab aad ku jebin karto wasakhda oo aad u hesho farshaxanka soo jiidashada haweeneydaas. Si aad u bilowdo dabeecaddaadu waa inay noqotaa mid naxariis iyo dabiici ah.
Mawqifkaagu waa inuu ahaadaa mid soo jiidasho leh oo jilicsan, taasi waxay tusinaysaa dantaada, laakiin macaan. Codkaaga kor ha u qaadin, ama ha noqon mid qallafsan, ama niyadda xun. Haweeneydu aad bay ugu farxi doontaa markay arkaan nin dhab ah oo buuxa dareenka kaftanka. Ma aha in si joogto ah loo sheego kaftanka, laakiin in wax walba oo wanaagsan laga helo nolosha macno qosol leh.
Hadday iyadu tahay qofka go'aansada inuu hadlo si fiican u dhegeyso, wuu oggol yahay oo wuxuu u qaataa dhammaan aragtiyadiisii ​​si fudud. Muuji xiisahaaga oo ku dar doodooda erayo kaabaya wada sheekaysigooda. Iskusoo wada duuboo, xooga saar sida ay dareemeyso iyo xiisee sida loo caawiyo.
Haddii aad u guureyso meel kale oo aad u raaci doonto, waa wax aad u sasabanaya inay dareento joogitaankaaga ogaanshaha taabashada gacmahaaga. Gacantaad ku qaban kartaa si aad ugu hagto geeska ama gacanta u saarto dhabarka ama dhexda, si ay u dareento taabashadaada.
Qodobbada muhiimka ah ee caawiya wada hadalka
Joogitaankaaga marka ay timaado joogitaanka ayaa ah qodobka koowaad. Waa inaad gudbisaa kalsooni iskuna day inaad is dejiso. Si aad tan u samayso, sii joogso raaxo leh, laabtaada kor u qaad, garbahaaga dib, laakiin iyada oo aan cidhiidhi ahayn.
Arrin kale oo sii hurineysa hal -abuurkaaga ayaa noqon karta marka nin si daacad ah ayuu u hadlaa oo dareenkiisa ayaa sii daaya. Ragga ayaa laga yaabaa inay muujiyaan nuglaanshahooda, laakiin dhinacani wuxuu aad u soo jiitaa dumarka, waxay arkaan ragga oo aad u jecel galmada.
Finalmente iyada ha noqoto halyeygaHaddii ay rabto inay hadasho, iska daa mutadawackeeda iyo si fiican u dhegeyso. Adigu ma noqon kartid qof wada sheekaysigan ah oo si xad dhaaf ah u hadla, sidoo kale si joogto ah uma qiimeyn kartid naftaada sida qof aan la kulmi doonin filashooyinka qaarkood. Daacadnimada iyo kalsoonidu way israacaan si aad u awooddo inaad qof ka adkaato.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato farshaxanka khiyaanada waad na akhrin kartaa waa "Sidee naag loo sasabaa","maxaa loola jeedaa marka haweeneydu kuu sheegto waxyaalaheedaThemaxaa loola jeedaa marka haweeneydu indhaha ku eegto".
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida dumarka loo sasabo
Noocyada baangada ragga
Buugaag is-qiimayn iyo is-hagaajin ah